CO2 लेजर मार्किंग मिसिन
फाइबर लेजर मार्किंग मिसिन
लेजर उत्कीर्णन र काट्ने मेसिन
AGFK लॉन घाँस काट्ने
ATV लॉन घाँस काट्ने
EFGC लॉन घाँस काट्ने
KDK म्यानुअल Sideeshift लॉन घाँस काट्ने
हाइड्रोलिक KDK Sideeshift लॉन घाँस काट्ने
KDK हाइड्रोलिक Sideeshift डिस्क घाँस काट्ने
ढु B्गा गाड्ने मेसिन
Bx42s काठ कोल्हू
लेजर उत्कीर्णन मिसिन को विफलता को बारे मा मुख्य बिन्दुहरु के हुन्?
लेजर उत्कीर्णन मिसिन, को रूप मा यसको नाम सुझाव दिन्छ, उत्कीर्णन सामाग्री को लागी लेजर द्वारा उत्कीर्ण हुन को लागी एक उन्नत उपकरण हो। लेजर उत्कीर्णन मेसिन मेकानिकल उत्कीर्णन मिसिन र अन्य परम्परागत म्यानुअल उत्कीर्णन विधिहरु बाट फरक छ। मेकानिकल उत्कीर्णन मिसिन मेकानिकल मलाई प्रयोग गर्दछ ...
विभिन्न प्रकारका लेजर काट्ने मेसिनहरु बीच के फरक छ?
वर्तमान मा, धातु प्रशोधन र निर्माण काटने बाट अविभाज्य छन्। त्यहाँ काट्ने विधिहरु को एक किस्म हो। वर्तमान मा, सबैभन्दा उपयुक्त लेजर काट्ने छ। लेजर काट्ने धेरै प्रकार मा विभाजित छ। वर्तमान मा, सबैभन्दा मुख्यधारा फाइबर लेजर काट्ने, CO2 लेजर काट्ने र YAG लेजर ग ...
कसरी लेजर काट्ने मेसिन संचालित हुन्छ
कसरी लेजर काट्ने मेसिन काम गर्दछ? लेजर काट्ने मेसिन को संचालन हार्डवेयर र सफ्टवेयर मा विभाजित छ। हार्डवेयर मुख्य रूप मा केन्द्रित छ। जब ध्यान केन्द्रित, शरीर को सबै भागहरु लेजर प्रकाश पथ अवरुद्ध छैन। जलन बाट सावधान रहनुहोस्। सफ्टवेयर: त्यहाँ विशेष लेजर काट्ने मेसिन छन् ...
शंघाई Yandoon उद्योग कं, लिमिटेड